Home Wararka Farmaajo oo kulan muhim ah la qaatay kooxa “Argagaxisada ee ONLF”……….!
Farmaajo oo kulan muhim ah la qaatay kooxa “Argagaxisada ee ONLF”……….!
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa uu la kulmay qaar ka mida mas’uuliyiinta Jabhadda Xureeynta Soomaali Galbeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan ONLF.
Sanad iyo bar ka hor ayaa ay ahayd markii Dowladiisa, gaar haan xukuumadda isaga hoostimaado ay u aqoonsatay in Ururka ONLF uu yahay urur argagaxiso ah, kaas oo laga mamnuucay dalka Soomaaliya.
Waxaa wax lala yaabo noqotay in Farmaajo uu la kulmo sawirna iskala qaado urur ay dowladiisa u aqoon santahay in ay tahay argagaxiso. Dadka xeeldheerayaasha ee u kuur-gala arimaha Soomaaliya aya ku sifeeyay dhaqanka Farmaajo labo arin midkood.
1) In Farmaajo yahay doqon aan dowladnimo waxba ka garaynin oo u dhaqmayo qof fahamkiisa dowladnimo ay ku kooban tahay in uu calanka Soomaaliya surta goobaha uu fariisto laakiin aan qiyaasi karain mas’uuliyada saaraan inta ay la eg tahay. Hadii Soomaaliya ka jiri lahaa sharci iyo garsoon madax banaan waxa ay ahayd in maxkamad la soo taago oo lagu qaado sharciga qayaano qaran oo xukunkeedu yahay dil.
2) In Farmaajo uu miyirka la’a yahay oo uusan ahayn qof fiyoow ileen dhaqanka noocaan ah qof fiyoow oo miyir qaba ma sameeyn lahaynin. Hadii waxyar oo caqli ah ku jiri lahaa waxa uu isku dayi lahaa in uusan la kulmin kooxdaan hadii uu si qarsoodi ah ula kulmana sawir isagama qaadeen.
ONLF waa jabhad wadaniyad ah dadka Soomaaliyeed u hayaan xushmo iyo sharaf. Madaxdeeda waxaa loo arkaa in yihiin halyeeyo Soomaali ah. Hadii caqli shaqeynayo oo qofka ka dhowrsanayo ceeb ilaalinaya sharafta Ummadda Soomaaliyed shaqsigii hogaanka u hayay xukumadii ku tilmaamtay ONLF argagaxiso, waa Xassan Kheyre waa uu iscali lahaa.
Xasaan Cali Kheyre shacabka Soomaaliyeed Jariimo ayuu ka galay maalin unbaa lala xisaabtami doonaa. Farmaajo waxa uu noqday mid taariikhada Soomaalida meel mugdi ah ka galay waxana shaki ku jirin in uu si fool xun uu kursiga uga tagi doono.